SomaliaReport: Ismaadim Qarax oo Lala Eegtay Aqal Madaxweynaha
By MOHAMED NUXURKEY 02/08/2012
Gaari waxyaasha qarxa ka buuxaan ayaa lala eegtay makhaayad ku taal Hoteelka Muuna ee bartamaha Muqdisho oo udhow xarunta Aqalka Madaxweynaha.
Askarta Dawlada Ku Meel Gaarka (DKMG) ayaa rasaas ku hoobinaya aaga, inkastoo aan la garaneyn bartilmaameedka rasaasta.
Sarkaal DKMG ah, Axmed Xasan Maalin oo u waramay suxufiyiinta ayaa sheegay in 11 lagu dilay weerar 15 kalena ku dhaawacantay. Sida uu sheegay Daahir cabdulqaadir Muuse oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in shan mudanayaalna ku dhaawacmeen. Qaraxu wuxuu dhacay xilli dad farabadani isugu yimaadaan aaga.
Hoteelka Muuna oo ku caanbaxay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa wuxuu ahaa bartii qaraxii ismaadiminta Ogosto 24, 2010 ka dhacay, isagoo ay ku dhinteen 32 qof. Waxaa qaraxaa naftooda ku waayey lix mudanayaal oo ka tirsan baarlamaanka.